လူ ဦး ရေအချိုးအစားကျော်လွန်ပြီးတိုင်းတာနိုင်သောထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအဆင့်မြင့်သောပရိသတ်များအပိုင်းအမျိုးအစား Martech Zone
လူ ဦး ရေအချိုးအစားကျော်လွန်ပြီးတိုင်းတာနိုင်သောထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအဆင့်မြင့်ပရိသတ်များအပိုင်းအမျိုးအစားများ
တနင်္လာနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 14, 2020 တနင်္လာနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 14, 2020 ဂျော့ခ်ျ Rowlands
Marketing Automation အတွက်သင်ယုံကြည်သောမည်သည့်ဆရာကိုမဆိုကျေးဇူးတင်ပါ။ များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Marketing ကိုအလိုအလျောက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရန်နှင့် Marketing Automation ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းကိုယိုစီးလှုပ်ရှားမှုများနှင့်၎င်းတို့လုပ်ဆောင်ရန်အပြုအမူဆိုင်ရာသတိပေးအကြောင်းကြားခြင်းဖြင့်အောင်မြင်နိုင်သည်။ Mail Merge သည်ကောင်းကင်ဘုံမှပေးပို့သောအခြားလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကြောင်းအရာတစ်ခုစီ၌လက်ခံသူတစ် ဦး စီ၏အမည်နှင့်အီးမေးလ်၏ပထမစာကြောင်းကိုထည့်သွင်းရန်အခွင့်အလမ်းသည်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိသောပြောင်းလဲမှုဖြစ်သည်။
အမှန်တရားဆိုတာက Marketing Automation မဟုတ်ပါဘူး နိုင် အများကြီးအများကြီးသွား; ဒါလည်းကြောင့်ပါပဲ လိုအပ်ချက်များ အများကြီးအများကြီးသွားကြဖို့။ သူတို့ကိုမင်းရဲ့ပထမနာမည်နဲ့ခေါ်ခဲ့ပေမယ့်ကျန်တဲ့သင့်အီးမေးလ်ဟာ humdrum ပါ၊ ပြီးပြီ - ပြီးသွားပြီ၊ အဲဒါလုံးဝမဟုတ်ဘူး။ အမှန်တကယ်ထူးခြားသည့်အကြောင်းအရာကပိုလိုအပ်သည်။ အထူးသဖြင့်လူ ဦး ရေစာရင်းထက် ကျော်လွန်၍ ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာခွဲထုတ်ရန်လိုအပ်သည်၊ ဖောက်သည်များကိုသိရန်၊ သူတို့လိုချင်သောအရာကိုနားလည်ရန်နှင့်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များနှင့်တိုက်ရိုက်ပြောဆိုရန်လိုအပ်သည်။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအပိုင်းသည်လူ ဦး ရေ၏ကျော်လွန်မှုထက်ကျော်လွန်နေသည်
ပရိတ်သတ်အပိုင်း အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ အို၊ ဒါအသစ်တော့မဟုတ်တော့ဘူး။ မည်သည့်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအသင်းများအနေဖြင့်မျှော်လင့်ထား။ ၄ င်းတွင် ၄ င်းတို့တွင်ရှိသောကွဲပြားခြားနားသောဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်၎င်းတို့ခွဲဝေနိုင်သော attribute တွေပေါ် မူတည်၍ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပရိသတ်ကိုအုပ်စုခွဲများအဖြစ်ခွဲထုတ်ခြင်းနှင့်အုပ်စုဖွဲ့ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ သငျသညျပြီးသားလူတိုင်းမှာမှာကဘာလဲဆိုတာသိ, ဒါဟာအလုပ်ဖြစ်တယ်နှင့်စာရင်းဇယားသူတို့ကိုယ်သူတို့စကားပြော။
စားသုံးသူ ၇၆ ရာခိုင်နှုန်းသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသည်၎င်းတို့၏ ဦး စားပေးများကိုသတိပြုမိရန်မျှော်လင့်ကြသည်။
လူ ဦး ရေအချိုးအစားသည်မူရင်းနှင့်အများဆုံးအကျဆုံးဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်သူတို့ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်လော ၎င်းတို့သည်အသက်၊ တည်နေရာနှင့်လိင်စသည့်အဓိကအခြေခံ attribute များအပေါ် အခြေခံ၍ လူအများကိုကွဲပြားစေပြီးလူအနည်းငယ်ကိုအမည်ပေးသည်။ ဒါပေမယ့်ဒီနေ့ဟာ segment ရဲ့ segment အားလုံးရဲ့ be-all and end မဟုတ်ပါဘူး။ အသေးအဖွဲကိစ္စတစ်ခုကိုသူတို့ဘယ်ကလဲ၊ ဘယ်လောက်ဟောင်းတာလဲဆိုတာကိုအခြေခံပြီးယေဘုယျအားဖြင့်ခွဲထုတ်ရန်မလုံလောက်ပါ။ ၎င်းသည်ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ခြင်းမဟုတ်ပါ၊ သင့်ရဲ့ဖောက်သည်များပိုကောင်းထိုက်သည်။
အမျိုးအစား ၁ - စိတ်ပညာဆိုင်ရာကိုအခြေခံသည့်အပိုင်း
လူ ဦး ရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များကမည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်ကိုဖော်ပြသည် အဘယ်သူသည် စိတ် ၀ င်စားစရာအချက်အလက်များကတစ်စုံတစ်ခုကိုဝယ်နေသည် အဘယ်ကြောင့် သူတို့အားလူများကဝယ်ယူနေကြသည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုမည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဆို အသုံးပြု၍ သူတို့၏ပရိသတ်များဝယ်ယူသည့်အပြုအမူများကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်ဟုယူဆနိုင်သည်။ ဤကဲ့သို့သောသုတေသနမျိုးကိုပြုလုပ်သောကုမ္ပဏီများသည်ဖောက်သည်များကိုမကြာခဏကြည့်ရှုလေ့ရှိသည် စံနှုန်းများ၊ လူနေမှုပုံစံ၊ အတန်းအဆင့်၊ ထင်မြင်ချက်များ၊ ယုံကြည်ချက်များ၊ နှင့် နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများ။
လူ ဦး ရေဆိုင်ရာကိုယ်ရေးအချက်အလက်
25 မှ 30
ဝင်ငွေ ~ $ 25,000
စိတ်အားထက်သန် Cyclist & ဘောလုံးသမား
လူငယ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်; အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှု
Psychographic သည်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများအားသူတို့၏ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များစုံစွာဖွင့်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ အသုံး ၀ င ်၍ သန့်ရှင်းသောအချက်အလက်များသည်အညီအမျှခွဲခြားထားခြင်းဖြင့် ၄ င်းတို့၏ဖောက်သည်ဘာသာစကားဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအဆင့်တွင်စကားပြောနိုင်အောင်၊ ထုတ်ကုန်တစ်ခုက၎င်းတို့မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်နှင့်အပြည့်အဝနားလည်ရန်နှင့်၎င်းတို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်အကောင်းဆုံးအင်္ဂါရပ်များကိုအာရုံစိုက်စေသည်။ ၎င်းသည်ထုတ်ကုန်တစ်ခု၏ဘ ၀ နှင့်မည်သို့ကိုက်ညီသည်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောအတွေးအခေါ် ပေး၍ ၎င်းတို့ဆီသို့၎င်းတို့၏စာတိုပေးပို့ရေးကိုတိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။
ဘယ်လိုလဲ? စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွဲထုတ်ခြင်းသည်ပရိသတ်ကိုမတူကွဲပြားသောအပြုအမူများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်လိုအပ်သည်။ ပါ ၀ င်သူတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားအချက်အလက်များရှာဖွေရန်စစ်တမ်းများ၊ အင်တာဗျူးများနှင့်ဉာဏ်စမ်းပဟေasိများကဲ့သို့သောဆန္ဒအလျောက်ရင်းမြစ်များမှတဆင့်ပြုလုပ်သောအရည်အသွေးဆိုင်ရာသုတေသနကိုအသုံးပြုသည်။ မေးခွန်းများသည်စက်မှုလုပ်ငန်းအပေါ်တွင်မှီခိုသောမည်သည့်အကြောင်းအရာမဆိုအကျုံးဝင်နိုင်သည် ဥပမာအားဖြင့် B2B ကုမ္ပဏီများသည်အာရုံစိုက်လေ့ရှိသည် အလုပ်အကိုင် -to- ခံရဖို့ နှင့်ဖောက်သည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာမေးခွန်းများကို။ ဤမေးခွန်းများကကုန်ပစ္စည်းအား Ideal Customer Profil (ICP) ၏နေ့စဉ်အလုပ်နှင့်မည်သို့ကိုက်ညီရမည်နှင့်သူတို့၏ထုတ်ကုန်သည်ရလဒ်များကိုအရှိန်မြှင့်ပေးနိုင်ပုံကိုရှင်းပြသည်။
သတိရပါ တိကျသောစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့်သီးသန့်တည်ရှိမှုကိုချိုးဖောက်ခြင်းအကြားကောင်းမွန်သောမျဉ်းကြောင်းရှိသည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့အချက်ကတော့အသုံးပြုသူရဲ့အချက်အလက်တွေကိုသူတို့ခွင့်ပြုချက်နဲ့သာသင်စုဆောင်းသင့်တယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ဆီကသင်တောင်းနေတာတွေဟာကိုယ်ရေးကိုယ်တာနဲ့ထိုးဖောက် ၀ င်စားမှုလည်းမဟုတ်ကြောင်းသေချာစေသင့်တယ်။ ဤအကြောင်းကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်ရယူရန်မှာစိန်ခေါ်ချက်ဖြစ်နိုင်သည်။ စိတ်ကူးကောင်းတစ်ခုမှာသူတို့၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်အကျိုးစီးပွားနှင့်သက်ဆိုင်သော၊ အသုံး ၀ င်သော freemium ပါဝင်မှုသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်တစ်ခုသို့မဟုတ်မကြာသေးမီကတီထွင်ထားသောလုပ်ဆောင်ချက်အတွက်သီးသန့်အစောပိုင်းဝင်ရောက်ခွင့်ပေးရန်ဖြစ်သည်။
2 ရိုက်ပါ: တစ် ဦး ကဖောက်သည်တန်ဖိုးအပေါ်အခြေခံပြီးအပိုင်း
အကျိုးစီးပွား -based segment, အလားအလာ, ဦး ဆောင်နှင့်လက်ရှိဖောက်သည်များစားသုံးသောအမျိုးအစားအမျိုးအစားကိုအထူးကြည့်ရှုသည်။ ၎င်းသည်သုံးစွဲသူများအားသူတို့၏ကုန်ပစ္စည်းကိုရှာဖွေစဉ်တွင်တန်ဖိုးနှင့်ကျွမ်းကျင်မှု မှလွဲ၍ ဘာမျှမပေးခြင်းအားဖြင့်ထိုသုံးစွဲသူများကိုထပ်မံတွန်းရန်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အလားအလာများထဲမှတစ်ခုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အီးမေးလ်ပို့ခြင်းစာရင်းတွင်စာရင်းသွင်းထားပါက၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အီးမေးလ်လိပ်စာအအေးမိ eBook ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်သောကြောင့်၎င်းကိုအီးမေးလ်ပို့ရန်စိတ်ဝင်စားသောလူများအုပ်စုထဲသို့ထည့်နိုင်သည်။
အထက်ပါဖော်ပြချက်သည်အလွန်မှန်ကန်သည်။ သို့သော်တန်ဖိုးအခြေပြုရောင်း ၀ ယ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးသည်ကျွန်ုပ်၏ကုန်ပစ္စည်းအလားအလာအတွက်အသုံးဝင်သောအကြောင်းရင်းများကိုနားလည်ရန်နှင့်အားဖြည့်ရန်ဖြစ်သည်။ သူတို့သည်ငါ၏အအေးမိအီးမေးလ်လမ်းညွှန်များကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်နေသည်ကိုသတိပြုမိပါက၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်၏အကြောင်းအရာလိုင်းဘလော့ဂ်များကဲ့သို့အအေးမိသည့်အီးမေးလ်အကြောင်းအရာများကိုပိုမိုစိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်။ walkthrough ငါ၏အ '' မည်သည့်အီးမေးလ်လိပ်စာကိုရှာဖွေရန် '' ။
နောက်ဆုံးတွင်စျေးကွက်သမားများက၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အတိုင်းအတာကိုချဲ့ထွင်နိုင်ပြီးသူတို့၏ထုတ်ကုန်များကိုအရောင်း ဦး ဆောင်သည့်သရုပ်ပြသရုပ်ပြခြင်းအားဖြင့်နောက်ထပ်အလားအလာကိုတွန်းအားပေးနိုင်သည်။ သူတို့ရဲ့ဆုဟာ ၄ င်းတို့ရဲ့သွင်းအားစုမှရရှိသောမြင်သာပြီးပျော့ပျောင်းသောရလဒ်ဖြစ်သည်။ ရှေ့ဆက်သွားလျှင်၊ သူတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခင်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောတုံ့ပြန်မှုနှုန်းများအတွက်သူတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်အောင်မပြုလုပ်မီအစုလိုက်အပြုံလိုက်အီးမေးလ်များကိုစကေးဖြင့်ပေးပို့နိုင်ကြသည်။
3 ရိုက်ပါ: တစ် ဦး ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှတန်ဖိုးအပေါ်အခြေခံပြီးအပိုင်း
Value-based segment သည် segment တစ်ခု၏မဟာဗျူဟာဖြစ်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်မည်မျှတန်ဖိုးပေးနိုင်သည်ကို အခြေခံ၍ အုပ်စုများတွင်အလားအလာများ၊ ဦး ဆောင်သူများနှင့်ဖောက်သည်များအားနေရာချသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ဒီဟာကိုအထူးသဖြင့်ကိုယ်ပိုင်မောင်းနှင်မှုအပိုင်းခွဲခြင်းနည်းပညာလို့ကျွန်တော်မသတ်မှတ်ဘူး။ သို့သော်စီးပွားရေးလောကသို့ကူးစက်ပျံ့နှံ့ခဲ့ပြီးနောက်၎င်းသည်ထိရောက်သောနှင့်ထိရောက်စွာခွဲထုတ်ခြင်းအကြားခြားနားချက်ဖြစ်တော့မည်။
ဝယ်ယူနိုင်စွမ်း so ခန့်မှန်းရခက်။ ကူးစက်ရောဂါနှင့်၎င်း၏နောက်ဆက်တွဲပိတ်ဆို့မှုလမ်း ကွဲပြားခြားနားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုထိခိုက်ခဲ့သည် ကွဲပြားခြားနားသောစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်လုံးဝ Anomalous ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအီလက်ထရွန်နစ်ရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်အများစုမှာတိုးတက်များပြားလာသော်လည်းခရီးသွားကုမ္ပဏီများအားဒူးထောက်ခေါ်ဆောင်သွားကြသည်။ ရောင်း ၀ ယ်ဖောက်ကားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် ၄ ​​င်းတို့ကိုမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်ကို အခြေခံ၍ ၄ င်းတို့၏ဖောက်သည်များကိုအပိုင်းလိုက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်လိုအပ်သည်။ ထို့နောက်၎င်းတို့သည်ဖောက်သည်များအားကူညီရန်စိတ်ကြိုက်ပါ ၀ င်သောစာနာမှုရှိသောအကြောင်းအရာများကိုကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။
ဘယ်လိုလဲ? စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်စကားပြောဆိုသောဖောက်သည်အတွေ့အကြုံကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ ဖျက်သိမ်းခြင်းတောင်းဆိုမှုကိုမထိုင်ပါနှင့်။ သင်နှင့်သက်ဆိုင်သောအရောင်းအ ၀ ယ်မေးခွန်းများသို့မဟုတ်အရောင်းအဝယ်ကွင်းများနှင့်သင်၏ဖောက်သည်များအားဆက်သွယ်ပါ။ စိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ စာနာမှု၊ မိတ်သဟာယဖွဲ့မှုနှင့်သူတို့၏လိုအပ်သည့်အချိန်တွင်သူတို့ကိုကူညီလိုသောစိတ်ဆန္ဒပြပါ။ နောက်ခြေလှမ်းတစ်လှမ်းလှမ်းပါ၊
ကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့မည်မျှအထိထိရောက်သည်ကို အခြေခံ၍ ကွင်းခတ်ထားပါ။ သူတို့ခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုရင်၊ သူတို့ဟာလျှော့စျေးကမ်းလှမ်းမှုတွေကိုအသုံးချဖို့ပိုလွယ်ကူလိမ့်မယ်။ သူတို့ကြီးပွားမယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာအလားတူထုတ်ကုန်တွေကိုရောင်းဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မယ်။
4 ရိုက်ပါ: ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအပေါ်အခြေခံပြီးအပိုင်း
နောက်ဆုံးသင်ခန်းစာ အဆင့်မြင့်အပိုင်း class သည် brand တစ်ခုနှင့်မည်ကဲ့သို့ဆက်ဆံသည်ကိုအခြေခံသည့်ပရိသတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပိုင်းပိုင်းခွဲခြားခြင်းနှင့်အလားအလာ၊ ဦး ဆောင်ခြင်းနှင့်ရှိပြီးသားဖောက်သည်များသည်အမျိုးမျိုးသောပလက်ဖောင်းများတစ်လျှောက်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်မည်သို့ဆက်ဆံသည်ကိုစဉ်းစားသည်။ ၎င်းသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာ၊ ပွင့်လင်းနှုန်းထားများ၊ ကလစ်နှိပ်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့ပါဝင်သောပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုရန်အတွက်မည်သည့်ထုတ်ကုန်ကိုသုံးသည်။
ဆီလျော်မှု၊ ကြိမ်နှုန်း၊ ခေါ်ဆိုမှုသို့လှုပ်ရှားမှု။
သင်၏အလားအလာသည်သင်၏အီးမေးလ်များကိုဖွင့်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်းသင်သိပြီးဖြစ်ပါကနောက်ဆက်တွဲအီးမေး (၇) ခုကိုပေးပို့ခြင်းဖြင့်အချိန်ဖြုန်းစရာမလိုပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့်၊ သင်သည်အလားအလာတစ်ခုသည်သင်၏အီးမေးလ်များကိုပုံမှန်ဖွင့်ပေးသည်ကိုသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းတုံ့ပြန်မှုမရှိပါ။ ၄ င်းတို့ကိုနောက်ဆက်တွဲများအတွက်ပွင့်လင်းသောသို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောထိတွေ့ဆက်ဆံမှုလိုင်းလိုအပ်သောမြင့်မားသောထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအုပ်စုတွင်ထားရှိသင့်သည်။
Personalization သည်ဘာသာရပ်လိုင်းများကို A / B စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပြီးသူတို့၏ပွင့်လင်းမှုကိုသော့ဖွင့်သောမှန်ကန်မှုကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဘာသာရပ်များတွင်ပါ ၀ င်ဆင်နွှဲသောသူတို့၏ကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းအခွင့်အလမ်းများကိုတိုးမြှင့်ပေးရန်ရည်ရွယ်ထားသည်။ ၎င်းသည်၎င်းတို့အားဖွင့်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးအချိန်တွင်အီးမေးလ်ကွင်းဆင်းပို့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင့်တော်သောအချိန်ပမာဏကိုပို့ပေးသောကြောင့်သင်သည်သင်၏လက်ခံသူကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်ပါ။
ဘယ်လိုလဲ? ထိတွေ့မှုတိုင်းကိုခြေရာခံသည့်အီးမေးလ်ခြေရာခံခြင်းရလဒ်များကို အခြေခံ၍ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုအပိုင်းများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ များသောအားဖြင့်၎င်းတွင်အီးမေးလ်များသို့သေးငယ်သောခြေရာခံပစ်ဇယ်များကိုထည့်သွင်းသောဆော့ဝဲလ်ကိုအသုံးပြုခြင်းပါဝင်သည်။ ဤခြေရာခံပစ်ဇယ်များဖွင့်သောအခါ၎င်းသည်ဖောက်သည်၏ဆာဗာများသို့ download တောင်းဆိုမှုကိုပို့သည်။ ဒါကိုကိန်းအဖြစ်သတ်မှတ်သည် ကြည့်ရှုခြင်း။ ၎င်းမှသုံးစွဲသူများသည်သူတို့၏အကြောင်းအရာများကိုမည်သူမည်သည့်အချိန်၊ မည်သည့်အချိန်တွင်ဖွင့်သည်ကိုတွေ့နိုင်သည်။
သတိရပါ ငါသာဒီဥပမာမှာအီးမေးလ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းရည်ညွှန်းတာပါ၊ အီးမေးလ်သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင်အစဉ်အလာအရဆုံးသောပုံစံဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နှစ်သစ်သို့ဝင်ရောက်စဉ်စင်မြင့်ပေါ်သို့တက်ကြွချတ်များ၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့်ပြည်တွင်းအသိုင်းအဝိုင်းပလက်ဖောင်းများလာသည်ကိုမြင်တွေ့ရသည်။ ဤအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့လည်းခြေရာခံ။ ကွဲပြားခြားနားသောလမ်းကြောင်းများတစ်ခုချင်းစီတွင်ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံရှိရမည်။
ပရိသတ်ကို segment ကိုလူ ဦး ရေအချိုးအစားထက်ကျော်လွန်တတ်၏။ ၎င်းသည် ၀ ယ်သူ၏လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အခြေအနေများကိုကြည့်သည်။ သူတို့လိုချင်တာကိုကြည့်တယ် ဒါကြောင့်သူတို့ကိုသင်လိုချင်တာကိုပေးနိုင်တယ်။ ယနေ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်သော့ချက်ဖြစ်သည်။
Tags: လှုပ်ရှားမှုများပရိသတ်နှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပရိသတ်အပိုင်းယုံကြည်ချက်ဝယ်လှုံ့ဆျောမှုဝယ် segmentအတန်းအဆင့်အတန်းဖောက်သည်တန်ဖိုးကို segmentအသက်အပိုင်းအခြားအီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစိတ်အပိုင်းလူနေမှုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက် segmentစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအပိုင်းထင်မြင်ချက်များpersonalizationစိတ်ပညာpsychographic ပရိုဖိုင်းကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ segmentရောင်းသူsegmentတန်ဖိုးများကို
အရိပ်အမြွက်ဖော်ပြချက် - ဂုဏ်သတင်းစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ စိတ်ဓါတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်ရှာဖွေခြင်းနှင့်လူမှုမီဒီယာဖော်ပြချက်များအတွက်သတိပေးချက်များ